Ahoana no fanaovana tsipìka - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Fomba fanaovana tsipìka
Fomba fanaovana tsipìka
Tiako ny tsipìka. Izaho koa dia manana ny iray amin'ny decathlon, izay mahafinaritra ahy indrindra.
Saingy tsara ireo hazo ary ao amin'ny horonantsary asehon'izy ireo amintsika ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny antsipiriany.
efa nampiasaina silaka voasarimakirana, fiberglass, tady nylon 16 mirandrana hahazoana tady. Na dia mino aza aho fa miaraka amin'ny hazo oliva dia hahazo takelaka hazo amin'ny alàlan'ny fanitsiana ampy ianao,
Tena tiako ny fomba famolavolany ny arc miaraka amin'ny compresseur rivotra, heveriko fa izany no sarotra indrindra ateraka ao an-tranontsika, saingy azo antoka fa azo foronina amin'ny fomba hafa izy io.
Topazo maso ity sangan'asa kely ity.
Mieritreritra ve ianao fitaovana hafa hananganana andohalambo?
Fomba fanamboarana milina fanaovana tatoazy an-trano
Ahoana ny fomba fanaovana charger ho an'ny ipod nano mahazatra sy mikasika